NYI LYNN SECK 18+ DEN: တစ်ထီလာ
ဘလောဂ် မဝင်ဖြစ်တာ အရင်တစ်လ လုံးလုံးပာပဲ။ ရေးမယ် ရေးမယ်နဲ့ တေးထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေက များပေမယ့် အချိန်ပေးရတာတွေ ဖြစ်နေလို့ တစ်ခုတစ်ခု ပြီးဖို့ တှောတှော ကြိုးစားယူရပာတယ်။ ဒီအကြောင်းလေးလည်း ရေးနေတာ တှောတှောကြာပာပြီ။ မောရစ်ကောလစ်ရဲ့ နေဝင်ဘုရင်များ မဖတ်ဘူးသေးတဲ့ သူတွေ အနေနဲ့တော့ ဒီအကြောင်းတွေကို သိပ်ရင်းနှီးမယ် မထင်ပာဘူး။ ဿFacebook မှာ ကျိုင်းတုံစှောဘွားအဆက် အန်ကယ်ဦးခိုင်းမွန်ရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ တွေ့လိုက်တဲ့အခာ ကျွန်တှော့စိတ်ထဲမှာ ဖတ်ဖူးတဲ့ စာတွေနဲ့ ရုပ်ပုံတွေကို ဆက်စပ်ချင်စိတ် ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ အဓိက အခြေခံတာကတော့ ကောလစ်ရဲ့ စာအုပ်ပာပဲ။ သူ့စာအုပ်ထဲ ပာလာတဲ့ နာမည်တှောတှောများများကို အန်ကယ့်ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာ တွေ့လိုက်ရတာကြောင့် ဒီအကြောင်း ရေးဖြစ်ပာတယ်။ တစ်ချိန်က ထင်ရှားခဲ့တဲ့ လူတွေနဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို မပျောက်ပျက်သွားအောင် ရေးမှတ်ထားတဲ့ သဘောပာ။ သိချင်တာတွေကို ပြောပြတဲ့ အန်ကယ့်ကို အထူး ကျေးဇူး တင်ပာတယ်။
Sao Nang Tip Htila
Sao Nang Tip Htila: Eclectic Collecting: Art from Burma in the Denison Museum
စဝ်နန်းတစ်ထီလာ (Sao Nang Tip Htila) ဆိုတဲ့ နာမည်ကို မောရစ်ကောလစ်ရဲ့ Lords of the Sun-Set (နေဝင်ဘုရင်များ- ကျှောအောင်) စာအုပ်ထဲမှာ ပထမဆုံး စတွေ့ဖူးခဲ့ပါတယ်။ တစ်ထီလာဆိုတဲ့ နာမည်ဟာ ပါဠိသက် ဂုံစကားဖြစ်ပြီး နတ်သုဒဿဓါလို့ အမည်ရပါသတဲ့။ သူမဟာ ၃၈ ဆက်မြောက် ကျိုင်းတုံစှောဘွားကြီး Sao Kawng Tai နဲ့ Sao Mong Keng Hkeng တို့ကနေ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ၃၉ဆက်မြောက် စှောဘွားကြီး စဝ်ကောန်ခမ်းဖူ (Sao Kawng Hkam Hpoo) နဲ့ ၄၀ မြောက် စဝ်ကောန်ကျောက် အင်ထလိုင်း (Sao Kawng Kiao Intaleng) ရဲ့ ညီမတှောလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ (စကားချပ်။ အင်ထလိုင်း စှောဘွားကြီးကို ကောလစ်ရဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ ၅၃ယောက်မြောက်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဝီကီက ဆွေစဉ်မျိုးဆက် ဇယားမှာတော့ အယောက် ၄ဝမြောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်တာသန်းထွန်းရဲ့ နယ်လှည့်ရာဇဝင်မှာတော့ ၃၈ ဆက်မြောက်လို့ ဆိုထားပါတယ်။)
တစ်ထီလာဒေဝီဟာ ၁၈၉ဝကျှောလောက်မှာ ကျိုင်းခမ်းစှောဘွားနဲ့ လက်ဆက်ပြီး သားတှောတစ်ပါး ဖွားမြင်ခဲ့တယ်။ သားတှော ဖွားမြင်ပြီးချိန်မှာတော့ စှောဘွားနဲ့ ပြတ်စဲပြီး ကျိုင်းတုံမှာ ပြန်သွားနေပါတယ်။ တရုတ်နယ်စပ် မိုင်းပလုံမှာ လေးနှစ်လောက် အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ကျိုင်းခမ်းစှောဘွား ကွယ်လွန်ချိန်မှာ သားဖြစ်သူဟာ အရွယ်မရောက်သေးတာမို့ တစ်ထီလာဒေဝီက ရင်ခွင်ပိုက် ၁၂နှစ်ကြာ အုပ်ချုပ်ပေးခဲ့ရတယ်။ အဲဒီနောက် သားဖြစ်သူကို အာဏာလွှဲပေးပြီး သူကတော့ ကုန်သည်လုပ်ပါတယ်။ ဆင်တွေ မှောတှောကားတွေကအစ အရောင်းအဝယ် လုပ်ဖူးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဝန်တင် မြည်းတွေ လားတွေနဲ့ နေရာအနှံ့ကိုလည်း ရောက်ခဲ့ဖူးသူ တစ်ယောက်ပါ။ (ဝီကီမှာ Andrew Dalby ရေးထားတာမှာတော့ တစ်ထီလာဟာ ပထမ ကျိုင်းခမ်းစှောဘွားနဲ့ ပြတ်စဲပြီး နောက်အိမ်ထောင် ပြုတယ်လို့ ပါပေမယ့် ဘယ်သူနဲ့ ပြုတယ်ဆိုတာတော့ မတွေ့ရပါဘူး။ ကျိုင်းတုံစှောဘွား အဆက်အနွယ် အန်ကယ်ဦးခိုင်းမွန် ပြောပြရာမှာတော့ နောက်အိမ်ထောင် ပြုတယ်ဆိုတာ မကြားမိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။)
သူမဟာ အကိုဖြစ်တဲ့ ကျိုင်းတုံစှောဘွား အင်ထလိုင်း နဲ့အတူ ၁၉၀၃ ခုနစ် အိနဿဒိယနိုင်ငံ ဒေလီမြို့မှာ ကျင်းပတဲ့ ခုနစ်ယောက်မြောက် အက်ဒွက်ရဲ့ နန်းတက်အောင်ပွဲ အခမ်းအနားကိုလည်း တက်ရောက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒီ အချိန်တုန်းက သူမဟာ ကျိုင်းခမ်းနယ်ကို သားတှောကိုယ်စား ရင်ခွင်ပိုက် အုပ်ချုပ်နေတဲ့ မဟာဒေဝီတစ်ပါး ဖြစ်တာမို့ အကြီးအကဲ အနေနဲ့ တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ သဘောမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလမ်းခရီးမှာ သူ့မှာပါလာတဲ့ လက်ဝတ်ရတနာ ပစဿစည်းတွေ သူခိုးခိုးခံရလို့ ပဥဿစမမြောက် ဂျော့ဘုရင်နဲ့အတူ တိုင်းခန်းလှည့်လည်လာတဲ့ မေရီမိဘုရားနဲ့ တွေ့ချိန်မှာ ဝတ်စရာ အဆင်တန်ဆာ ဘာတစ်ခုမှ မရှိပဲ တွေ့ခဲ့ရပါသတဲ့။ မေရီမိဖုရားက ဒါကို သိသွားပြီး သူဝတ်ထားတဲ့ လက်စွပ်တစ်ကွင်းကို ချွတ်ပြီး တစ်ထီလာဒေဝီလက်မှာ ဝတ်ပေးပါတယ်တဲ့။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒေလီဒါဘာမှာ တစ်ထီလာဒေဝီဟာ တစ်ဦးတည်းသော ဆင်စီးပြီး တက်ရောက်ခဲ့သူ မိန်းမသားရယ်လို့ ထင်ရှားပါတယ်။
၁၉၀၃ ဒေလီဒါဘာကို တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ စှောဘွားများ။ နောက်တန်း ဘှောလိက်စှောဘွား၊ ကနဿတာရဝတီစှောဘွား၊ ကြယ်ဖိုးကြီး စှောဘွား။ ရှေ့တန်း- မိုင်းပွန်စှောဘွား၊ ကျိုင်းတုံစှောဘွား၊ ညောင်ရွှေစှောဘွား။
အင်ထလိုင်းဟာ စှောဘွားအရိုက်အရာကို ၁၈၉၅ခုနစ်မှာ ဆက်ခံခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဘွဲ့က ဇောတိဇေဋဿဌ ပရမဒိပိနဿတ ဘောပိတရ မဟာရတန ဇောတိသီရိ သုဓမဿမဝရ ဇေယသိဟဋဿဌ မေခမဏိပဝရ ဇေဋဿဌရဇ ဘူမိနနဿတရိနဿတ ခေမာဓိပတိ ဇေယဓိရာဇ ဖြစ်ပါတယ်။ အိနဿဒိယစတိုင် ကျိုင်းတုံဟှောနန်းကြီးကို ၁၉၀၃ (၁၉၀၆ ဒေါက်တာသန်းထွန်း) ဒေလီပွဲကအပြန်မှာ ဆောက်ခဲ့တယ်။ သူ့မှာ ကြင်ယာတှော ခြောက်ယောက် ရှိပြီး သားသမီး ကိုးယောက် ထွန်းကားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ် (ကောလစ်)။ မဟာဒေဝီက မိုင်းဆင်မြို့စားရဲ့ သမီး စဝ်နန်းပဒုမဿမာ (Sao Nang Paduma) ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၈၉၄မှာ သူတို့ လက်ထပ်ပါတယ်။ အသက် ၆၂နှစ်အရွယ် ၁၉၃၅ ဇူလိုင် ၂၁မှာ သူကွယ်လွန်ခဲ့တယ်။ သူကွယ်လွန်တဲ့အခါ သူ့အရိုက်အရာကို သူ့ရဲ့သား စဝ်ကွမ်တိုင် (Sao Kawng Tai) က ဆက်ခံတယ်။
Sao Konkeau Intaleng with sons. Back Row: Sao Saimong, Sao Kwang Tai, Sao Konkeau Intaleng, Sao Hpromlue, Sao Hkun Suik. Front Row: Sao Zing Zai, Sao Yawt Mong,Sao Keau Mong, Sao Boonwaat. (ဓာတ်ပုံမှာ ကျိုင်းတုံစှောဘွားကြီး အင်ထလိုင်းရဲ့နံဘေးက စဝ်ကွမ်တိုင်နဲ့ စဝ်ဖုန်းလူတို့ကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်)
တကယ်တော့ စဝ်ကွမ်တိုင်ဟာ မဟာဒေဝီက မွေးဖွားခဲ့သူတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ စဝ်ကွမ်တိုင်ကို ဒုတိယ ကြင်ယာတှော နန်းဖောင် (Nang Fong) ကနေ မွေးဖွားခဲ့တာပါ။ စဝ်ကွမ်တိုင်ဟာ သားတှောတွေ အားလုံးထဲမှာ အသက်အရွယ်အားဖြင့် အကြီးဆုံး ဖြစ်တဲ့အပြင် စှောဘွားကြီး အင်ထလိုင်းဟာ သူ့ကို အခြား သားတှောတွေထက် ပိုပြီး ချစ်မြတ်နိုးလို့ သူ့အရိုက်အရာကို ဆက်ခံစေခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။
Sao Kawng Tai - 41st Sao Hpa of Kengtung
တကယ်တမ်း အစဉ်အလာအရဆိုရင် ကျိုင်းတုံစှောဘွား အရိုက်အရာကို ဆက်ခံနိုင်သူအဖြစ် မဟာဒေဝီကနေ မွေးဖွားတဲ့ စဝ်ဖုန်းလူ (Sao Hpromlue) ဆိုတဲ့ သားတှောတစ်ပါးလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။ စှောဘွားကြီးဟာ စဝ်ဖုန်းလူကို ဇင်းမယ်က စဝ်နန်တိပ်ပဝံ (Sao Nang Teppawan) နဲ့ လက်ဆက်စေပြီး မိုင်းလိက်စှောဘွားအဖြစ် ခန့်ထားတယ်လို့ သိရတယ်။ စဝ်ကွမ်တိုင်ကို အရိုက်အရာ လွှဲအပ်တဲ့အခါ စဝ်ဖုန်းလူက မဟာဒေဝီက မွေးတဲ့ သားကိုသာ အရိုက်အရာ လွှဲအပ်သင့်တယ်ဆိုပြီး ကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ စဝ်ကွမ်တိုင် စှောဘွားဖြစ်လာတဲ့ အခါမှာလည်း စဝ်ဖုန်းလူကို ဘိန်းကိစဿစနဲ့ အစိုးရအလိုလိုက်ပြီး နယ်နှင့်ဒဏ် ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၁၉၃၇ အောက်တိုဘာ ၂၂ စဝ်ကွမ်တိုင် လုပ်ကြံခံရတဲ့ အမှုမှာ စဝ်ဖုန်းလူကို အဓိက သံသယရှိသူတစ်ယောက် အနေနဲ့ စစ်ဆေးခဲ့ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စဝ်ကွမ်တိုင် ကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် သေနတ်နဲ့ပစ်ပြီး လုပ်ကြံခဲ့သူက တစ်ထီလာဒေဝီရဲ့ သားတှော ကျိုင်းခမ်းစှောဘွားဟောင်း (?) ရဲ့ သားအကြီး စဝ်သီဟ (Sao Hsiha) ဖြစ်ပါတယ်။ စဝ်သီဟဟာ အဲဒီအချိန်က ရန်ကုန်ယူနီဘာစတီကောလိပ်မှာ ဒုတိယ ဥပစာတန်း တက်နေတဲ့ အင်းဝကျောင်းဆောင်သား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအမှုမှာ စဝ်ဖုန်းလူဟာ တရားသေလွတ်သွားပြီး စဝ်သီဟကတော့ တစ်သက်တစ်ကျွန်း ကျခံရပါတယ်။
Sao Sai Long: 43rd Sao Hpa at his ascending the Kengtung
ကွယ်လွန်သွားတဲ့ စဝ်ကွမ်တိုင်ရဲ့ စှောဘွားအရိုက်အရာကို သူ့ရဲ့သား စဝ်စိုင်းလုံက ၄၂ဆက်မြောက် ကျိုင်းတုံစှောဘွားအဖြစ် ဆက်ခံခဲ့ပါတယ်။ (စဝ်စိုင်းလုံဟာ အသက် ၁၈ နှစ်မှာ ကျိုင်းတုံစှောဘွားကြီး ဖြစ်လာပြီး ၁၉နှစ် (၁၉၄၇) မှာ ကျိုင်းတုံနယ် လူမျိုးစုလွှတ်တှောအမတ် ဖြစ်ခဲ့သူပါ။ အသက်အငယ်ဆုံး အမတ်ဖြစ်သလို နောက်ဆုံး ကျိုင်းတုံစှောဘွားကြီးလည်း ဖြစ်ပါတယ်)။ မှတ်တမ်း တစ်ခု အရတော့ စဝ်ကွမ်တိုင် ကွယ်လွန်တဲ့အခါ ထိုင်းဘုရင်ကနေ စဝ်ဖုန်းလူကို ၄၂ဆက်မြောက် စှောဘွားအဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဂျပန်ခေတ်မှာလည်း စဝ်ဖုန်းလူကို ကျိုင်းတုံ စှောဘွားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဂဿငလိပ်တွေ ပြန်ဝင်လာပြီး နောက်ပိုင်း မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေး ရတဲ့ အချိန်မှ နိုင်ငံခြားမှာ ပညာသင်ကြားနေတဲ့ စဝ်စိုင်းလုံကို အစိုးရက ပြန်ခှေါပြီး ကျိုင်းတုံစှောဘွားအဖြစ် အုပ်ချုပ်စေခဲ့ပါတယ်။
ကောလစ်ရဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ ထင်ရှားတဲ့ နာမည်တွေ အတှောများများကို တွေ့ရပါတယ်။ သခင်မလေး ရေမြှုပ်ညင်သာလို့ နာမည်ပေးထားတဲ့ စဝ်ဖောင်းလှိုင် (Sao Fonglai)ဟာ လူသတ်မှု တရားခံဖြစ်တဲ့ စဝ်သီဟနဲ့ မောင်နှမ တှောစပ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဖခင်နေရာမှာ စဝ်ဟုံခမ်း (Sao Hong Kham) လို့ တွေ့ရတဲ့အတွက် တစ်ထီလာဒေဝီရဲ့ သားတှော အရိုက်အရာကနေ ရုတ်သိမ်းခံရတဲ့ ကျိုင်းခမ်းစှောဘွားဟောင်းဟာ သူလို့ပဲ မှတ်ယူရမယ် ထင်ပါတယ်။ စဝ်ဟုံခမ်းရဲ့ဖခင်၊ တစ်ထီလာရဲ့ ကြင်ယာတှော ကျိုင်းခမ်းစှောဘွားကြီး နာမည်ကိုတော့ မတွေ့ရပါဘူး။
Sao Nang Tip Htila at age of 69
ကောလစ်နဲ့ တွေ့ဆုံချိန်မှာ တစ်ထီလာဒေဝီဟာ အသက် ခုနစ်ဆယ်နီးပါး ဖြစ်နေပါပြီ။ နာမည်အလွန်ကြီးတဲ့ တစ်ထီလာဒေဝီကို ကောလစ်ဟာ တကူးတကကို သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ထီလာဒေဝီဟာ သူ့အဖေဖြစ်တဲ့ စှောဘွားက သူတို့နယ်ထဲလာတဲ့ ဆာဂျော့စကော့ကို လုပ်ကြံဖို့ စီစဉ်နေတာကို မြင်းစီးပြီး ကယ်တင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကောလစ်ရဲ့ စာအုပ်ထဲမှာတော့ မဟာဒေဝီဟာ အသက်၆၉နှစ် ရှိပြီ ဖြစ်ပေမယ့် ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်မှု အတတ်ပညာကို ကောင်းစွာ ကျွမ်းကျင်တဲ့သူ၊ ဩဇာကြီးသူ၊ ထက်မြက်သူ၊ အသိပညာ ပြည့်စုံသူ၊ ထက်မြက်သူ၊ သွက်လက်ပြီး အားမာန်အပြည့်ရှိသူ စတဲ့ ဝိသေသပေါင်း များစွာနဲ့ ချီးမွမ်းထားပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း တချိန်က လျှမ်းလျှမ်းတောက် ခြသေဿင့တစ်ကောင်လို ထက်မြက်ခဲ့တဲ့ တစ်ထီလာဒေဝီဟာ အဲဒီအချိန်မှာတော့ အကျပိုင်းကို ရောက်လို့ နေခဲ့ပါပြီ။ သူ့ရဲ့ အရောင်းအဝယ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းတွေဟာလည်း အကျိုးအမြတ် နည်းပါးလာခဲ့ပြီး ပင်စင်လည်း တစ်လမှာ ခုနစ်ပေါင်နဲ့ ဆယ်ရှီလင်ပဲ ရပါတော့တယ်။ သူမမကွယ်လွန်ခင်မှာ လောင်းကစားကြောင့် ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ပစဿစည်းဥစဿစာတွေ အတှောများများ ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ သူမဟာ နောက်ပိုင်းမှာ တောင်ကြီးမြို့မှာပဲ အတှောကြာကြာ နေထိုင်သွားခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ၁၉၅၀-၆၀ ခုနှစ်လောက်မှာတော့ သူမ ကွယ်လွန်သွားပါတယ်။
ခေတ်သစ်တစ်ခုဆီကို ချီတက်နေတဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်မှာ တစ်ထီလာဒေဝီဟာ သမိုင်းပုံပြင်တစ်ခုနဲ့ တူတယ်လို့ ကောလစ်က ရေးခဲ့ပါတယ်။ ကောလစ် မြန်မာပြည် ရောက်ခဲ့စဉ်က မြန်မာပြည်ရဲ့ နာမည်ကျှော တရုတ်သူဌေးကြီး လင်ချင်ချောင်း ဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ ချင်းချောင်းခြံကြီးထဲမှာ တစ်ထီလာဒေဝီရဲ့ ပုံတူပန်းချီကားကြီး နှစ်ခုကို တွေ့ခဲ့ရပါသေးတယ်။ အဲဒီ ပန်းချီကားတွေကို ဆွဲခဲ့သူက နာမည်ကျှော ပန်းချီဆရာကြီး ဦးဘဉာဏ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ထီလာဒေဝီ၏ တူမတှော၊ လုပ်ကြံခံရသော ကျိုင်းတုံစှောဘွား စဝ်ကွမ်တိုင်ရဲ့ ဖအေတူ မအေကွဲနှမ၊ ထီးတစ်သန်းဟှောနန်းမှ သခင်မ နတ်ကြေးမုံ သိနဿဒီမဟာဒေဝီ စဝ်ဗန်တစ် (Sao Van Tip)
မိုင်းနောင်မြို့စားရဲ့ ရွာမှာထားတဲ့ ကြင်ယာတှော တစ်ယောက်
ချီဖန်းဟှောနန်းက စမ်းရေသခင်မ စောနန်းကို (မောရစ်ကောလစ်ရဲ့ စာအုပ်မှာ သူ့အကြောင်းကို အခန်း နှစ်ခန်းစာ လောက်အထိ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်)
ကျိုင်းတုံမြို့ကို အုပ်စိုးခဲ့ကြတဲ့ စှောဘွားအစဉ်အဆက်
1. 1243-1247 Mang Kun (Delegate of Mang Rai, founder of Kengtung State)
2. 1247-1253 Mang Kyin
3. 1253-1264 A son of Mang Rai withamonk in joint charge
4. 1264-1317 Sao Nam Nam
5. 1317-1324 Sao Hsam Mun Hwe
6. 1324-1342 Sao Lak
7. 1342-1360 Sao Hsai Nan
8. 1360-1370 Sao Yu
9. 1379-1387 Sao Sit Pan Tu
10. 1387-1390 Sao Ai Awn
11. 1390-1403 Ai Wu Hsa
12. 1403-1460 Yi Hkam Hka
13. 1416-1441 Sao Hsam
14. 1441-1456 Sao Hsam si-li
15. 1456-1474 Ai Lao Hkam
16. 1474-1501 Ai Lao
17. Sao Naw Kiao (son of Ai Lao Hkam)
18. Hsai Hkaw (son of Ai Lao Hkam)
19. Hsai Hpom (son of Ai Lao Hkam)
20. Sao Hsam (son of Ai Lao Hkam)
21. Sao Kham Mu (son of Ai Lao Hkam)
22. 1523-1560 Hpaya Kiao (a monk called to rule)
23. 1560-1598 Sao Mong Hka
24. 1598-1620 Sao Hkam Tao
25. 1620-1637 Sao Mong Hkak
26. Sao On
27. Sao In Hkam
28. Sao Awk
29. Sao Mong Saik
30. Sao Hsam Hpi
31. 1730-1740 Maung Nyo (Yawnghwe Shan sent from Ava)
32. Sao Mong Sin
33. Sao Mong Hsam
34. 1787-1804 Sao Kawng Tai
35. 1813-1857 Sao Maha Hkanan
36. 1857-1876 Sao Maha Hpom
37. 1876-1881 Sao Hkam Hseng
38. 1881-1886 Sao Kawng Tai
39. 1886-1897 Sao Kawng Hkam
40. 1895-1935 Sao Kawng Kiao Intaleng
41. 1935-1937 Sao Kawng Tai
42. 1937-1959 Sao Sai Long
နေဝင်ဘုရင်များ၊ ကျှောအောင် (ဘာသာပြန်)
From Edinburgh to India and Burmah By William Gordon Burn Murdoch
History of the Shan State: From its origins to 1962 by Sai Aung Tun
Posted by NLS at 12/06/2009 01:32:00 PM
Labels: Biography, History, Selection
20 Responses to “တစ်ထီလာ”
၁၉၅၉-၆၀ လောက်မှာ စော်ဘွားတွေနန်းစွန့်ရတယ် ၁၉၆၂ နောက်ပိုင်းမှာ ထောင်ထဲထည့်တယ် နောက်ပိုင်း ပြည်ပနိုင်ငံတွေထွက်ပြေးကုန်တယ် ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်းမှာ ဟော်နန်းတွေအဖြိုခံရတယ် မောရစ်ကောလစ်ရှိရင် နေ၀င်မီးငြိမ်း ဆိုတဲ့စာအုပ် ထပ်ရေးလိမ့်မယ်
မှန်လိုက်လေခြင်းဗျာ .. ခုဒီမှာ .. (နိုင်ငံခြားရောက်မှ)မောရစ်ကောလင်းရဲ့ ဗမာ့နေ၀င်ချိန် (Twilight of Myanmar )တို့ ဘာတို့လေ .. အဲ့စာအုပ်တွေ ဖတ်ဖူးတော့တယ်။
မြန်မာ့လူမျိုးအတွက် အနောက်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ရဲ့ ဂုဏ်ယူမှုကို တွေ့ရတာ အခုနိုင်ငံသားမျိုးဆက်သစ်တွေနဲ့များ တစ်ခြားစီပဲ .. အရင်ကလူတွေကို အားကျမိတယ်ဗျာ ..
အပေါ်က ဇော် comment ကို ဖတ်ပြီး မောရစ်က သမိုင်းဆရာတယောက်လို မှတ်တမ်းတင်ပြီး ရေးခဲ့တာလား။ စာရေးဆရာတစ်ယောက်လို emotion နဲ့ ရေးခဲ့တာလား သိချင်မိတယ်။
မောရစ်ကောလစ်က မြန်မာပြည်ကို ချစ်တဲ့ စာရေးဆရာ တစ်ယောက်ပာ။ တရားစီရင်ရေးမှာလည်း မြန်မာတွေဘက်က မှန်တဲ့အခာ အမှန်အတိုင်း စီရင်ခဲ့လို့ သူ့ကို အဂဿငလိပ် တှောတှောများများက ချဉ်ကြတယ်။ သူက သမိုင်းဆရာလည်း မဟုတ်သလို ဝတဿထုဆရာသက်သက်လည်း မဟုတ်ပာဘူး။ စနဿဒမာလာတို့ ဘာတို့ဆို တကယ့်အဖြစ်အပျက် အပှောမှာ ဉာဏ်ကွန့်ပြီး သူပြန်ရေးတာ လှပာတယ်။ သူရေးထားတာတွေက သူ့အတွေ့အကြုံတွေ များပာတယ်။
ကိုညီလင်းဆက်ရဲ့စာကိုမဖတ်ရတာအတော်ကြာသွားပြီ။ အခုဒီဗဟုသုတလေး၊ ရှားပါးတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေတွေ့မြင်ခွင့်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
Tai YaungHwe (Shan NyaungShwe) said...
အချိန်တော်တော်ယူပြီးစုဆောင်းထားပုံရတယ်..လေ့လာအားထုတ်မှု ရှာဖွေဖော်ထုတ်မှု နဲ့ ဇွဲကောင်းမှုတို့ကိုချီးကျူးပါတယ်..ခုခေတ်လူငယ်တွေဟာ သမိုင်းကို
စိတ်ဝင်စားမှုအတော်နည်းသွားကြပြီ..လူငယ်တစ်ယောက်ကဒီလိုရေးနိုင်တာရှာဖွေနိုင်တာ အားကျမိတယ်...ပြီးတော့ ပျောက်ကွယ်နေတဲ့(အမှန်တော့ ဖျောက်ဖျက်ခြင်းခံထားရတာပါ) အရာတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တာကိုက နည်းတဲ့အားထုတ်မှုမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိသာပါတယ်..
အနွယ်တွေအကြောင်းတွေ ဖတ်ရတာ အနှစ်သာရပြည့်လိုက်တာ ..။
ရေးသားတင်ပြတဲ့ အစ်ကိုတော်ကို ကျေးဇူးကမ္ဘာ
zawgyi2009 သုံးထားလို့ ထင်တယ်။
ကျွန်မက zagyi one ပဲသုံးတာဆိုတော့
font Dowload လုပ်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်။
egress က ဆရာ့ တပည့်ဖြစ်ဖူးသူပါ
မောရစ်ကောလစ်ရဲ့ နေ၀င်ဘုရင်များ စာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးကတည်းက ရှမ်းစော်ဘွးအနွယ်တော်တွေအကြောင်းကို ရင်းနှီးနေတာကြာပါပြီ။ကျနော်ငယ်ငယ်က သိန်းနီ(ငှက်ပျောတစ်သိန်း) မှာ တစ်နှစ်လောက်နေဘူးတယ်။အဲဒီတုန်းက ကျနော်တို့နားမှာ နင်္ားမွေးတဲ့ ရှမ်းအဖွားတစ်ယောက် ရှိတယ်။ကျနော့အဖေကပြောတော့ အဲဒီအဖွားက တစ်ထီလာဒေ၀ီနဲ့ အမျိုးတော်တယ်လို့ပြောတယ်။ရှမ်းပြည်ကိုချစ်တယ်။ရှမ်းတွေက အရမ်းရိုးသားတယ်။ရှမ်းတရုပ်တွေကိုတော့ ကြည့်လို့မရဘူး။
သွေးမုန်တိုင်းကိုတော့ ကော်မန့်ဖတ်ပြီး ခင်သွားပြီ။ ဘာတဲ့...ရှမ်းတွေက အရမ်းရိုးသားတယ်ဆိုပဲ။ ဘယ်သူမဆို ကိုယ့်အမျိုးရိုးသားတယ်ပြောရင် ကြိုက်မယ် ထင်တာပ...နော့်။ ကိုလင်းဆက်ရေ....လုပ်ထားဗျ..ရှမ်းသမိုင်းလေးတွေ။
ကိုလင်းဆက် ဟိုတလောက ဖဘမှာ ဓါတ်ပုံတွေတွေ့လို့ ပျော်နေတာ ဒါထင်တယ်..း)
ခုလို ဝေမျှတာ ကျေးဇူးပါ...
လေ့လာအားထုတ်မှု ရှာဖွေဖော်ထုတ်မှု ကိုချီးကျူးပါတယ်....စကားမစပ် ညီလင်းဆက်က ရှမ်းလားဟင်?
lynn N tun said...
ကျွန်တော်အကို့ရဲ့ ဘလောက် မှာ ကျိုင်းတုံစော်ဘွားတွေ အကြောင်းကို ဖတ်ရတော့ အရမ်းပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...ကျွန်တော်က ကျိုင်းတုံသားဆိုပေမဲ့ ကျိုင်းတုံ စော်ဘွားအကြောင်းကို သေချာမသိခဲ့ဘူး..... အခုမှပဲ အပြည့်အစုံ သိရတဲ့အတွက် ၀မ်းသာမိပါတယ်...တင်ထားလေး တွေကို ဖတ်သွားပါတယ်... ကျေးဇူးပါပဲ...
ဒီဇာတ်လမ်းက ကျိုင်းတုံအကြောင်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံတော့ မဟုတ်ပာဘူး။ တစ်ထီလာအကြောင်းလောက်သာ ဆွဲထုတ်ပြီး ရေးဖြစ်တာပာ။ Sao Sanda ရဲ့ Moon Princess နဲ့ မကြာသေးခင်ကထုတ်တဲ့ Shan Culture စာအုပ်ကို ထိုင်းမှာ တွေ့ခဲ့ပာသေးတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ ကျွန်တှော မသိသေးတာတွေ အများကြီး ရှိနေပာသေးတယ်။ ဝယ်ချင်ပေမယ့် ဈေးကြီးလို့ နောက်များ ရွှေစငွေစရွှင်မှ ဝယ်ပြီး ဖတ်ကြည့်ပာဦးမယ်။
၁၉၅၉-၆၀ လောက်မှာ စော်ဘွားတွေနန်းစွန့်ရတယ် ၁၉၆၂ နောက်ပိုင်းမှာ ထောင်ထဲထည့်တယ် နောက်ပိုင်း ပြည်ပနိုင်ငံတွေထွက်ပြေးကုန်တယ် ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်းမှာ ဟော်နန်းတွေအဖြိုခံရတယ်......။(ကျော်ထင်)
နောက်ပြီး ရတနာပုံအဆက်အနွယ်တွေ ချောင်ထဲရောက်နေတာ၊
တစ်ထီလာကို နောက်တခေါက် သေချာ ပြန်ဖတ်ပါတယ်
((နောက်ပြီး ရတနာပုံအဆက်အနွယ်တွေ ချောင်ထဲရောက်နေတာ၊
စိတ်ပျက်စရာပါပဲ။)) Hein Latt
ပဒေသရာဇ်စနစ်တော့ အားမပေးတာ အမှန်ပဲဗျ။